तिथि मेरो पत्रु » छोडपत्र मेड पछि एक युवा महिला डेटिंग
यौन सम्बन्ध मा आयु असमानता कुनै एक असामान्य घटना. तथापि, केही समूहहरु मान्छे अरु भन्दा अक्सर यस्तो सम्बन्ध मुछिन. उदाहरणका लागि, मा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार विवाह र परिवार समीक्षा, सम्बन्ध विच्छेद मानिसहरू मिति सम्भावना बढी हो र तिनीहरूलाई भन्दा धेरै युवतीहरूसित remarry.
सबै भन्दा छोडपत्र मानिसहरू युवतीहरूसित केटासित हेर्न किन?
मनोवैज्ञानिक डेटिङ लागि तिनीहरूलाई भन्दा महिलाको लागि सानै हेर्न पारपाचुके मानिसहरू धक्का सक्छ कारक को एक नम्बर कुरा. सूची तल तिनीहरूलाई सबैभन्दा सामान्य व्यक्तिहरूलाई समावेश.
– तिनीहरूले जवान स्त्रीहरूलाई को लापरवाह मनोवृत्ति अधिक आकर्षक पाउन.
– एक छोडपत्र पछि, अधिकांश पुरुषहरु ठीक गर्न धेरै समय आवश्यकता; तिनीहरूले पहिले नै भावनात्मक संकष्टमा रूपमा, तिनीहरूले न्यूनतम भावनात्मक सामान संग तारीख महिलाहरु गर्न रुचि. युवा महिला, कारण कम डेटिङ अनुभव गर्न, सामान्यतया कम भावनात्मक सामान बोक्न.
– युवा महिला बसोबास मानिसहरूलाई प्रेस सम्भावना कम हुन्छ र एक परिवार छ. तिनीहरूले सामान्यतया भविष्यको बारेमा भन्दा वर्तमान बारेमा थप विचार; तिनीहरूले क्षण बाँचिरहेका मन. कुनै एजेन्डा स्वतः सम्बन्धविच्छेद मानिसहरूका लागि अधिक मजा डेटिङ बनाइदिन्छ राख्दा.
– यो युवतीहरूसित प्रभावित धेरै सजिलो छ. आफ्नो 40 का मा छोडपत्र मानिसहरू, 50को वा 60 का सामान्यतया अचम्मको ठाउँमा आफ्नो जवान साझेदार लिन पर्याप्त पैसा तिनीहरूले (छोरीहरूको) गर्न कहिल्यै छन्, तिनीहरूले रही को सपना देख्यो कहिल्यै उपहार किन्न र आफ्नो समस्या समाधान (जो सामान्यतया मूर्ख हुन्छन्) ठूलो अर्बको. यी कार्यहरू अक्सर केटीहरू अमेट छाप पार्न पर्याप्त छन्.
सबै कारक माथि छलफल गर्दा एक छोडपत्र मानिसले भन्दा धेरै कान्छो एक महिला केटासित निर्णय गर्दा खेल्न केही भूमिका छ, मानिस को यस्तो छनौट पछि अर्को व्यावहारिक कारण हुन सक्छ. तिनीहरूले आफ्नो उमेर समूह को कुनै पाउन सक्दैन किनकी युवतीहरूसित को खोज शुरू गर्ने मानिसहरू हुन्. तथ्याङ्क सम्बन्ध मा मानिस बीच छ जब संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै भन्दा सम्बन्धविच्छेदलाई ठाउँ लिन भनेर प्रकट 53 र 72 उमेर वर्ष; यस उमेर समूहको धेरै कम महिला अविवाहित रहने.
सम्बन्ध विच्छेद? एक जवान स्त्रीको डेटिंग? यी कुराहरू दिमागमा राख्नुहोस्
तपाईं भन्दा धेरै कान्छो एक महिला डेटिङ गर्दा, तपाईं मन मा केहि कुरा राख्नुपर्छ.
– तपाईंको साझेदार तपाईं वरिपरि कान्छो अध्या छैनन् भनेर थाह; यति, तपाईं हुन् भनी प्रमाणित गर्न प्रयास छैन एक. तपाईं मा आरामदायी छैनन् कि रंग नलगाउने; सामान्यतः वर्तमान पुस्ताका मान्छे द्वारा गरिन्छ कुरा के छैन; प्रयास तपाईं अझै पनि पर्याप्त बलियो छौं भनेर देखाउने बनाउन छैन. यी कुनै पनि महिलालाई सामान्यतया ठूलो turnoffs हो, युवा वा वृद्ध.
– तपाईं आफ्नो उमेर को एक महिला उपचार होला जस्तै नै आफ्नो जवान साथी व्यवहार. तपाईं उमेर असमानता बारेमा चेतना भने, सम्बन्ध काम छैन.
– तपाईं निश्चित रूप देखि आफ्नो जीवन मा नयाँ स्त्रीको लागि उपहार किन्न सक्छौं, तर तपाईं यो ज्यादा कहिल्यै गर्नुपर्छ. तपाईं नगद को पनि धेरै चमक भने, स्त्रीको तपाईं बस देखाउन खोजिरहेका छन् भन्ने सोचाइ हुन सक्छ.
एक ठूलो मान्छे र एक जवान स्त्रीको बीचमा सम्बन्ध कुनै नियमित रोमान्टिक सम्बन्ध जस्तै सामान्य छ. त्यसैले, एक छोडपत्र मानिस सानै केटासित देखिन्छ भने यो गलत केही छैन.